BBC Learning English - Course: English Expressions - Afaan Oromoo / Unit 1 / Session 6 / Activity 1
Yooyyaa, qophii jechoota Afaan Inglizii keessaatti of ibsuuf si fayyadan English Expressions akkasumas haara ta’n akka bartuuf si gargaarutti baga nagana dhufte.
Har’a, Afaan Inglizii keessattii of ibsuuf kan si fayyadu ‘a can of worms’ xaasaawaa raammoowwan keessa jiran jedhu ni barana. Maal jechuudha jette yaada? Wal’aaltee? Tole ittifufii caqasi.
Finii fi Feeyfeeyiin caqasi. Fin waa’ee raammoowwanii ‘worms’ waan qorachaa tureef waan argate Feeyfeeyitti himaa jira. Waan inni hubate bira gahe caqasi.
Yes, the part with the fat little bump on it will survive. I knew that.
It’s fascinating, isn’t it? And earthworms can be really short – from only one millimetre – to a massive three metres!
Fin waa’ee raammoowwan dachee irraa ‘earthworms’ dubbachaa jira. Qaama tokkorratti ‘male’ dhiira, fi ‘female’ dhalaa akka ta’u danda’an hubateera. Walqixxeesitee yoo addaan kuttee, ‘survive’ lubbuun jiraachuu danda’uu jedha. Akksumas hanga meetira sadii ‘three metres’ guddachuu danda’u. Maaliif waa’ee raammoowwanii akka dubatu hubachuuf caqasi.
Fin waa’ee raammoowwanii baay’ee waan dubbiseef waantoota nama hawwatan heddu bareera. Feeyfeeyi garuu hama gaalee har’a barachaa jiru ‘a can of worms’ itti himutti sababa inni waa’ee raammowwanii hammana dubbachaa jiruuf hingalleef ture. Feeyfeeyiin haala rakko heddu fiduu danda’u ibsuuf ‘a can of worms’ fayyadamna jechuun ibsiti. Haalli isaa akka xaasaa ‘can’ akka ta’e rakkoon immoo raammoowwan ‘worms’ akka ta’anitti mee yaadi. Xaasaa sana yoo banne haala rakko sana keessa yoo of argine jedchuudha, sana booda raammoowwan xaasaa keessaa bahu, raammoowwan sana deebisanii xaasaa sanatti galchuun waan salphaa miti.Kanaafuu haala rakkoowwan garaagaraa hedduuf sisaaxilaniifi furmaata kennuuf ulfaataa ta’e ibsuuf itti fayyadamna. Jechama asiin gaditti itti fayadaman dhageefadhu. Xaasaan maal akka ta’eefi raammoowwan maal akka ta’an hubachuu dandeessaa?
Finn waa’ee raammoowwan waan dabalataa akka hubatuuf itti dhiisna. Ati takkaa ‘a can of worms’ bantee beektaa? Maaltu ta’e? Waan hintaanetu si quunamee? Jechoota Afaan Inglizii of ibsuuf si fayyadan ‘English Expressions’ dabalataaf yeroo ittaanu walitti deebina.
Yaadadhu, gaalichi waa’ee raammoowwanii miti. Raammoowwan xaasaa keessa wanta biraa bakka bu’u.
Xaasaa raammoowwanii yoo banne, waan gadhe meeaqtu uumama?
Xaasaa tokko qofatu jira garuu rammoowwan hedduudha.